Madaxweyne Hassan Sheekh oo ku adkaysanaya In Golaha Wasiirada Laga dhigo 9 ama 10 wasiir. Maxay tahay ujeedadu? | Somali - Diaspora
Madaxweyne Hassan Sheekh oo ku adkaysanaya In Golaha Wasiirada Laga dhigo 9 ama 10 wasiir. Maxay tahay ujeedadu?
29 October 2012 Waagacusub.com- Madaxweyne Hassan Sheekh ayaa la sheegayaa inuu caqabad ku noqday magacaabidii golaha wasiirada Soomaaliya taasoo la sheegay inay sabab u tahay Madaxweyna oo doonaya in Golaha wasiirada ay u badnaadaan Saaxiibadiisa Damu Jadiid, sidoo kalana la sheegay in Madaxweynuhu ku adkaysanayo in golaha wasiirada aysan ka badnaanin 10 wasiir.
Ujeedka madaxweynaha uu ka leeyahay yareynta Golaha wasiirada ayaa dadka qaar ku sheegeen in madaxweynuhu uu doonayo in la magacaabo golo wasiiro oo aad u tiro yar, halka dadka qaarkii ay ku sheegayaan in Madaxweynaha uu madax xanuun ka qaaday taageerada xad dhaafka ah ee Raisul Wasaare Saacid uu ka helay Baarlamaanka xiligii ansixintiisa sidaa daraadeedna ay tahay arintaani caqabad uu u dhigayo Risulwasaaraha Soomaaliya, iyadoo ay xeeldheerayaashu sheegayaan in haddii Golaha Wasiirada laga yareeyo 18 xubnood uusan Golaha Baarlamaanku ansixin doonin.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Dr Jawaari iyo Raisul wasaaraha Soomaaliya Saacid ayaa la sheegayaa in ay labadooduba ku adkaysanayaan in aan Golaha Wasiirada aan laga yareynin 18 xubnood.
Sidoo kale caqabadaha la dareemay in Madaxweynuhu u dhigayo Raisul wasaaraha uu dhowaan magacaabay ayaa la sheegayaa inay kamid tahay in Madaxweynuhu uusan weli saxiixin Miisaaniyadii Dhowaan Baarlamaanku ansixiyey, iyadoo la sheegayo in Madaxweynuhu uu diidan yahay Mushaarka xildhibaanada Baarlamaanka ee laga dhigay 2000 Doolar, isaga oo doonaya in Mushaarku uusan ka badan 1000 Doolar.
Xildhibaanada Baarlamaanka ayaa la sheegayaa inay inta badan isku raacsan yihiin haddii uusan madaxweynuhu saxiixin Miisaaniyada ay gudbiyeen oo uu dib usoo celiyo in arintaasi aysan salfan doono Xukuumada Dr Saacid.
Madaxweyne Hassan Sheekh ayaa la sheegayaa inuu usoo muuqanayo nin talada dalka kaligiis marooqsan raba, doonayana inuu u yeeriyo RW dhamaan xubnaha kamid noqonaya golaha wasiirada.
Comment by somaliamomentum on October 29, 2012 2:38 pm
ODOYAASHA HAWIYE OO DIGNIIN U JEEDIYEY RAY’IISUL WASAARAHA
October 29, 2012 -Iyadoo Ray’iisul wasaaraha Dowlada Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon looga fadhiyo inuu soo magacaabo Golaha Wasiirada cusub ee Dowlada Soomaaliya ayaa waxaa laga digayaa in wasiirada soo socda la yareeyo.
Maxamed Xasan Xaad oo ah Gudoomiyaha Odoyaasha Midnimada beelaha Hawiye oo warbaahinta la hadley ayaa waxaa uu sheegay iney soo gaareen warar sheegaya in Ray’iisul wasaaraha Soomaaliya golaha wasiirada inuu ka dhigo 9-wasaaradood taas oo uu tilmaamay in aaney aheyn wax macquul ah.
Xaad oo hadalkiisa wata ayaa tilmaamay in wararkan ay ka heleen rag ka tirsan Dowlada Soomaaliya,islamarkaana aan marnaba macquul aheyn in wasiirada cusub laga dhigo Sagaal wasaaradooda,isagoona sheegay iney arintaasi ka fiirsadaan inta wasiirada cusub lagu dhawaaqin,maadama uu sheegey Maxamed Xasan Xaad in beelaha Soomaaliyeed ay badan yihiin.
Gudoomiyaha Odoyaasha Hawiye ayaa sheegay in hadii ay dhacdo in Golaha wasiirada laga dhigo sagaal wasaaradood iney dhibaatooyin kale ay horseedayaan Madaxda Dowlada Soomaaliya,waxaana uu ugu baaqey Madaxweynaha,Gudoomiyaha barlamaanka iyo Ray’iisul wasaaraha iney ka faa’iideystaan fursada ay hada heystaan.
Hadalkan ayaa waxaa uu soo baxey xili Ray’iisul wasaaraha Soomaaliya lagu wado in maalmaha soo socda uu ku dhawaaqo Golaha wasiirada,wallow aan la ogeyn tirada uu ka dhigayo Golihiisa wasiirada.
Muran Xoogan oo ka taagan Tirada laga dhigayo Golaha Wasiirada iyo Qaar kamid ah Beelaha Waa weyn oo laga yaabo in ay ku qadaan Golaha Wasiirada Prof. Jawaari: Dastuurka Cusub Dib u Eegis ayaan ku Sameynaynaa